Amazônia - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Amazonia)
I Amazônia dia faritra midadasika any Amerika Atsimo izay mivelatra avy any amin’ ireo lembalemban’ i Guyana hatrany amin’ ny tantavan-tendrombohitra Andy sy hatrany amin’ ny tapany avaratr’ i Brezily. I Amazônia dia ilay faritra tondrahan’ ny ony Amazôna sy ny renirano mamatsy an’ ity ony ity, izay mahatratra 4 500 000 km2 hatramin' ny 6 700 000 km2.
Sarin-tany maneho an' i Azônia araka ny famaritan' ny WWF.
Firenena valo no voafaoka amin’ izany, dia i Bôlivia, i Brezily, i Kôlômbia, i Ekoatera, i Goiana, i Però, i Sorinamy ary i Venezoela. Ny tapak’ i Amazônia ao Brezily i dia mitana ny 57 %n’ ny velaran-tanin’ ity firenena ity sy 63 %n' ny velaran-tanin' i Amazônia.
1 Jeôgrafian’ i Amazônia
1.3 Ny ony Amazôna
1.5.1 Fambolena sy fiompiana
1.5.2 Fitrandrahana harena voa-janahary
2 Fitsinjaràn' i Amazônia amin' ny firenena
3 Olana momba ny tontolo iainana
3.1 Fikapana ala
3.2 Fandoroana ala
Jeôgrafian’ i AmazôniaHanova
Manana toetanin-jana-pehin-tany mando i Amazônia, izay saika rakotra alam-pehiben-tany mando. Ny rotsak' orana dia mahatratra mihoatra ny 2 000 mm ao anatin’ ny enina na fito volana, fa ny sala-maripana mandritra ny taona kosa dia 27,9 °C amin' ny fotoan' ny main-tany fa 25,8 °C kosa amin' ny fotoan' ny orana. Mahatratra 77 % ny hamandoana mandritra ny main-tany fa 88 % kosa amin' ny fotoan' ny orana.
Sary maneho ny ampahany kely amin' i Amazônia breziliana.
Mitovy amin’ ny ala ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ny ala amazôniana ao andrefana, izay ahitana hazo mijoalajoala, fa ny ao atsinana kosa no ahitana ny ala amazôniana izay fohy kokoa sady ahitana karazan-javamaniry maro kokoa. Ny ala amazôniana no ala midadasika indrindra manearan-tany, izay 50 %n' ny alan-janam-pehin-tany eto an-tany. Isan-karazany ny endriky ny manodidina, ka miova avy amin' ny hivoka mankamin' ny ala tondrahan' orana izany.
Ny ony AmazônaHanova
Sarin-tany maneho an' i Amazônia
I Amazôna dia ony ao amin' ny tapany avaratr' i Amerika Atsimo izay mivarina any amin' ny Ranomasimbe Atlantika. Ny ampahany be amin' i Amazôna dia ao Brezily. Izy no ony manan-danja indrindra eto an-tany, amin' ny velaran' ny lemaka tondrahany sy isan' ny renirano mivarina ao aminy ary ny habetsahan-drano entiny (eo anelanelan' ny 35 000 sy 120 000 m3/s). Mirefy 6 400 km i Amazôna ka noho izany dia izy no mitana ny laharana faharoa maneran-tany aorian' i Nily.
Misy mponina miisa 7 000 000 any ho any ny ao Amazônia, ka ny 4 % amin’ izany dia vahoaka breziliana, sady ao no ahitana hakitroky ny mponina ambany indrindra eran-tany, vokatry ny fisian’ ny ala mikitroka amin’ ny ankabeazan’ ny velaran-tany sy noho ny tsy fisian’ ny tany mahavokatra. Mponina indiana no maro ao Amazônia, izay mivangongo ao amin’ny toerana anelanelan’ ony tsy tondraky ny rano. Ireo mponina ireo dia manohy ny fomba fiainany hatramin’ ny faha razana: miaina amin’ny fiotazana ny voan-kazo sy ny fakan-kazo fihinana any an’ ala, ary mivelona amin’ ny fihazana sy ny fanjonoana koa.
Tamin' ny taona 1952 dia niisa latsaky ny 300 000 ny Amerindiana tao Brezily, ary nidina 215 000 izany tamin' ny taona 1992. Maro ny ezaka natao mba hiarovana ny mponina indiana, ka ny fiarovana ny taniny no tsapa fa mahomby kokoa, izay noraiketina ao amin' ny lalàm-panorenan' i Brezily tamin' ny taona 1988. Niakatra ho 224 000 izany tamin' ny taona 2000. Maro koa anefa ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana manohana ny fiarovana ny tanin'ny Indiana. Na dia izany aza dia misy hatrany ireo tsy manaja izany: ny mpihady volamena, ny mpitrandraka hazo, ny mpanimba ala, ireo orinasa mitaky ny hitrandrahana ny harena an-kibon' ny tany.
Fambolena sy fiompianaHanova
Ny 3 %n’ ny tanin’ i Amazônia ihany no azo volena, dia ny faritra amin’ ireo lohasaha manamorona ny ony Amazôna. Mamboly mangahazo, kakaô, sy dipoavatra ny mponina ao Amazônia. Miompy omby koa izy ireo.
Fitrandrahana harena voa-janaharyHanova
Tamin’ ny taona 1964 dia ny miaramila no nandray ny fitondrana tao Brezily ka nanomboka nanao izay hahafantarana an’ i Amazônia. Nitrandraka amin’ ny fomba goavana ny harena an-kibon’ ny tany ny fitondram-panjakana mba hampandrosoany ny fifanakalozana ara-barotra amin’ ny any ivelany. Ny akoram-by tsy voasa ao amin’ ny lembalemban’ ny Carajás, dia notrandrahina teo amin’ ny velaran-tany mirefy 900 000 km², ka nahatonga an’ i Brezily ho lasa firenena faharoa amin’ ny fitrandrahana vy maneran-tany.
Isan’ ny akora notradrahina koa ny baoksita, ny manganezy, ny kasiterita, ny firapotsy, ny koaritsa (vatomazava), ny berilioma, ny krôma, ny zirkônioma, ny etona voajanahary ary ny eladrano. Nananomboka tamin’ ny taona 1979 dia nihazakazahana ny ho any Amazônia mba hitrandraka volamena ny olona, ka nahatonga an’i Brezily ho firenena voalohany amin’ny famokarana volamena maneran-tany.
Betsaka ny fitetezan-tany sy ny fitrandrahana natao tao Amazônia. Hatramin’ ny taona 1800 ka hatramin’ ny 1912 dia niteraka fifindrà-monina avy any Eorôpa sy avy any Brezily ny fahitana ny fingotra azo avy amin’ ny ditin’ ny hazo, izay azo anamboarana kodiarana sy vokatra hafa azo avy amin’ ny fingotra.
Fitsinjaràn' i Amazônia amin' ny firenenaHanova
Mahatratra 6 700 000 km2. ny velaran-tanin' i Amazônia izay mitsinjara toy izao amin' ireo firene ao Amerika Atsimo:
63 % ny an' i Brezily,
10 % ny an' i Pero,
7 % ny an' i Kôlômbia,
6 % ny an' i Bôlivia,
6 % ny an' i Venezoela,
3 % ny an' i Goiana,
2 % ny an' i Sorinamy,
1,5 % ny an' i Ekoatera,
1,5 % ny an' i Goiana frantsay.
Olana momba ny tontolo iainanaHanova
Ny fikapana mandripaka ala, izay mahatratra 8 000 000 ha isan-taona dia isan’ ny nanamarika ny fahitana an’ i Amazônia. Natao izany mba hahazoana tany hanaovana fambolena sy fiompiana, fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany ary ny famokarana hazo. Maro ny adihevitra sy ny fanoherana ny fandripahana ala, fikapana izay tsy nahazoana ny vokatra ara-toekarena nandrasana. Niteraka faharipahan’ ny foko indiana sasany nonina ao koa izany fandripahana ala izany.
Misy koa ny doro ala. Tamin' ny vola Aogositra 2019 dia imbetsaka no may ny ala ao Amazônia. Nahataitra ny Firenena Mikambana izany fanimbana ny alan' i Amazônia izany ka nikasa ny hiaro ny fitrandrahana sy ny fanimbana azy. Noho ny asan' ny olombelona dia ny 20 %n' ny alan' i Amazônia no ripaka ary 2,27 % isan-taona no manjavona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Amazônia&oldid=1037934"
Dernière modification le 16 Septambra 2021, à 10:04
Voaova farany tamin'ny 16 Septambra 2021 amin'ny 10:04 ity pejy ity.